अमेरिकाले ५० करोड डलर सहयोग गर्नुको अन्तर्कथा यसरी खोले डा.स्वर्णिम वाग्लेले - Medianp
अमेरिकाले ५० करोड डलर सहयोग गर्नुको अन्तर्कथा यसरी खोले डा.स्वर्णिम वाग्लेले
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: बिहिबार, भदौ २९, २०७४११:०८0
काठमाडौं, २९ भदौ । आज अमेरिकाले इतिहासमै पहिलोपल्ट नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर (५० अर्ब नेरु) आर्थिक सहयोग गर्दैछ । नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी सरकारका तर्फबाट उपविदेशमन्त्री जोन जे सुलीभानले वासिंगटनमा हस्ताक्षर गर्नेछन् ।
यो सम्झौताअनुसार कुल ६३ करोड डलरको कोष हुनेछ, जसमा नेपाल सरकारको १३ करोड डलरको योगदान हुनेछ भने अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर सहयोग हुनेछ । यो रकममार्फत लगानी गरेर नेपालको सडक सुधार र विद्युत् विकासका लागि एक एकीकृत योजना बनाइनेछ ।
अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) अन्तर्गत नेपाल यो सुविधा पाउने दक्षिण एशियाली क्षेत्रको एक मात्र देश हो। एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट नाम दिइएको उक्त सम्झौताअन्तर्गत प्राप्त गर्ने रकमले नेपालको गरिबी न्यूनीकरणका लागि र महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
अमेरिकाले ५० करोड डलर आर्थिक सहयोग गर्न किन राजी भयो ? भन्ने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.स्वर्णिम वाग्लेले केही तथ्य खुलाएका छन् । उनले यो सहयोग हुनुमा पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महतको विशेष योगदान रहेको बताएका छन् । डा.वाग्लेले साढे दुई वर्षपछि यो योजनाले सार्थकता पाएको उल्लेख गरेका छन् ।
वाग्लेले फेसबुकमा लेखेका छन् :
५० करोड डलरको हर्ष
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको यो ऐतिहासिक ‘ट्रीटी कक्ष’ मा आज ५० करोड डलर बराबरको सम्झौतामा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सही गर्नु हुनेछ । नेपालले धेरै सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने गरे पनि यति ठूलो (अनुदान) पाएको पहिलोपटक हो । हामी विद्युत उत्पादनमा गति लिँदैछौ, तर वितरणको समस्या चर्कदैछ । यस अमेरिकी सहयोगबाट अर्को पाँच वर्षभित्र ३०० कि.मी. उच्च भोल्टेजको विद्युत वितरण लाइन बन्नेछ । सन् २०१५ को सुरुतिर यो पहलमा चासो दिएर काम अगाडि बढाउन रामशरण महतले योजना आयोगका गोविन्द पोखरेल र मलाई लगाउनुभयो ।
हामीले पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीको नेतृत्वमा एउटा उत्कृष्ट नेपाली प्राविधिकहरूको टोली छानेर काम ग¥यौं । अढाई वर्षपछि सार्थक प्रतिफल आएको छ । धेरैजनाले राम्रो भूमिका खेल्नुभयो भने हालका आयोजना प्रमुख तुलसी सिटौलाका साथै अर्थ मन्त्रालयका बैकुण्ठ अर्याल र मधु मरासिनीको योगदान विशेष उल्लेख्य छ ।
तस्बिर : डा.स्वर्णिम वाग्लेको फेसबुकबाट